esteeem - Steem - GoldVoice.club
← # esteeem
Mother Liberty For POTUS Candidate 2020!!
**Mother Liberty shall be appointed to represent *We The People* in 2020 per the conditions as laid-out here:**
Steem $ Price hits $0.59(SBD)
Steem dollars (Currency:SBD) traded 0.3% higher against the dollar during the 24hour period ending at 9:00 am E.T. on january 6th.
One steem dollars coin can currently be purchased for about $0.59 or 0.00007781 BTC on popular exchanges.
Total Worth of Museician Bridge Token here on Steemit
Daily Digital Art Post
Welcome to my daily Post, last time I talked about the effect of stroke outline witharightful colour shade onablack background.
If you are reading this post for the first time. Try to Check again tomorrow, I post daily graphic works with tips of how to #DIY
To good-karma, should I say thanks?
I think so, did you figure it out?
My lovelly flower part 2
Hello friends. this morning I walked around the complex, and saw various types of flowers, many types and colors, but I myself also do not understand what the names of these flowers are. because the flower belongs toaneighbor. hhhhhh
Yes, it's owned byaneighbor, well, when I pass by, I'll takeapicture. because it's beautiful and many kinds.
FPL results (@aggamun)
ဒီ တပတျ FPL ရကျသတ်တပတျ ကတော့ မနျစီးတီး တို့ရဲ့ ရကျသတ်တပတျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျဘကျအသငျးကို ၁၈ မိနဈ အတှငျး ၅ဂိုး သှငျးပွီး ခွစှေမျးပွ ခဲ့ပါပွီ။ ပှဲ အပွီးမှာတော့ ၈ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ အောငျပှဲ ခံနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ထို့ အတူပဲ FPL အမှတျ တှလေညျး သူတို့ တဈသငျးလုံး န…
Menikmati keindahan awan, pesona langit tanpa kabut asap.
Seminggu yang lalu dari atas kapal di selat malaka ada pemandangan unik di langit, sepintas kita lihat awannya seperti berbentuk jari dan juga seperti daun.
Itulah hari terakhir saya bisa melihat pemandangan lukisan yang diciptakan oleh alam itu sen…
Wild card သုံးလိုက်ပါပြီ (@aggamun)
ပွီးခဲ့တဲ့ တပတျက ပိုဈ့မှာ ကြှနျတျော ပွောခဲ့သလို ပါပဲ။ အခု ဒီ လူစာရငျး က ကြှနျတျော Wild card အခှငျ့အရေး ကို အသုံးခပြွီး ခွစှေမျး တညျငွိမျမှု ရှိနိုငျမယျ့ ကစားသမား မြားကို ပေးထားတဲ့ ငှကွေေးနဲ့ ကိုကျညီအောငျ ရှေးခယျြလိုကျပါတယျ။ အကောငျးဆုံး တှေ ခညျြးလိုခငျြ ပ…
Should I delete the old iPhone app? The new one seems to be working fine
Chini mosque is located in Saidpur upzilla and Nilphamari district.
ခုတစ်လော ရာသီ တုပ်ကွေးတွေ အဖြစ်များနေ ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေး တွေလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ခုလို ဖောက်ပြန်လာတဲ့ ရာသီဥတု အနေအထားမှာ လူကြီးတွေ လည်း စိတ်ချ ထားလို့ မရပါဘူး။ ကျန်းမာရေး အထိအခိုက် မရှိအောင် သတိထား စောင့်ရှောက် ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ တော့ အငယ်ဆုံး နှစ်ကောင် စ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒေါင်းဒေါင်း ပြေး ဆော့ ကစားတတ်တဲ့ ကောင်တွေ မို့ မကစား ဖြစ်တော့ ရင် အိမ်က ငြိမ်သက်နေတော့ သိသာ လှပါတယ်။ အဲဒီလို ကစား တော့ အခုလို အချိန်မှာ ဖျားပေမယ့် ခဏ ပါပဲ။ ဆေးခန်းပြ ဂြိုဟ်တု ထည့် ကုသ ပေးလိုက်တာ အခုဆို အရင်လ…
La verdad sea dicha que es una escursión muy chula y sin ninguna dificultad técnica. Apta para pequeños y mayores. De paso podréis disfrutar del precioso p…
El hidromiel del pirineo
El otro día en un mercado medieval compre en un puesto de bebidas artesanales este Hidromiel realizado de forma artesanal por una pequeña empresa de Jaca (Huesca). Este hidromiel esta hecho artesanalmente con agua y miel de los pirineos.
Pensamentos do coração 💭
Hora de almoço. Azáfama. Buzinadelaepasso apressado. Transeuntes ensimesmados de olhos postos nos telemóveiserosto franzido, concentrado.
Talheres. Loiçaatinireconversas mastigadas em tom monocórdico. Queixumes, maledicênciaechoro infantil…